မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဖူးစာစုံလို့ ရင်ခုန်ခဲ့ပါလျှင် (၃)
Posted by mabaydar at 2:25 AM
ဟဟ... အခုမှပဲတင်တော့တယ်.. ဟွန့်... ဖတ်လိုက်ပြီ... ထပ်စောင့်နေမယ်... see you....
စောင့်ဖတ်နေတယ် ငါးသလဲထိုးရေ အပိုင်း ၁ စထဲကဖတ်နေတာ
Thanks for your post ... Thumb up!!!
အရမ်းကောင်းတယ်.. စာဖတ်သူကို အပါခေါ်သွားနိုင်တယ်.. အဆုံးထိအောင်စောင့်ပြီး ဖတ်မယ်... မြန်မြန်လေးရေးပါ.. :)
5/15/2010 11:42 AM
ကွန်မန့်သိပ်မတွေ့လို.အားနည်းနေမှာဆိုးလို. လာအော်သွားချင်းပါ။ :D
What are you trying to say? I didn't quite get you. Or is it just comment spamming?